यसरी गरौं पुरानो मोबाइलको सदुपयोग onlinedarpan.com
Friday 1st of July 2022 / 03:23:59 AM
यसरी गरौं पुरानो मोबाइलको सदुपयोग
अनलाइन दर्पण 2016-12-01
बजारमा नयाँ मोडलको मोबाइल आएपछि किनौं किनौं नलाग्ने मानिस कमै मात्र हुन्छन् । तर, पुरानो मोबाइल हुँदाहुँदै नयाँ मोबाइल किन्न अप्ठ्यारै हुन्छ । पुरानो बेचेर नयाँ किन्ने योजना भए पनि भन्ने बित्तिकै बिक्ने कुरा पनि आउँदैन । नयाँ मोडल, नयाँ भर्शन, नयाँ लुक्स, नयाँ फिचर्स, नयाँ सुविधाले खल्ती चिलाइरहन्छ र मन एक हिसाबले खसखस भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा अब के गर्ने त ? यही समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पुरानो मोबाइलको उपयोग गर्ने भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएकाे छ ।
पुरानो मोबाइल सेकेण्ड ह्याण्ड मार्केटमा नबिकेसम्म वा घरमै सङ्ग्रह गरिराख्दा उपयोग गर्ने केही तरीका :
अडियो भिडियो प्लेयर
पुरानो स्मार्टफोनलाई यत्तिकै थन्क्याएर राख्नुभन्दा यसलाई अडियो भिडियो प्लेयरको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । घरबाहिर जाँदा एमपीथ्री प्लेयरको रूपमा पनि यसलाई उपयोग गर्दा मुख्य मोबाइलको ब्याट्री सकिनबाट जोगिन्छ । घरमै राख्ने भए मोबाइलको एसडी कार्डमा गीत भरेर ऊफर वा म्युजिक प्लेयर जोडेर बजाउन सकिन्छ । यसका लागि ब्लुटुथ डिभाइस जोडेर पनि गीत सुन्ने वा टेलिभिजनसँग कनेक्ट गरेर चलचित्र हेर्न सकिन्छ । यसरी मोबाइल फोनलाई म्युजिक सिष्टममा जोडेर यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
रिमोट कण्ट्रोल डिभाइस
स्मार्टफोनलाई रिमोट कण्ट्रोलरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । स्मार्टफोनबाटै म्युजिक प्लेयर, एसी, टीभी र डीभीडीलगायत उपकरण कण्ट्रोल गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक एप्स डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यदि मोबाइलमा आईआर ब्लाष्टर छ भने त एप्स नभए पनि सीधै उपयोग गर्न सकिन्छ ।
घरमा सीसी क्यामेरा राख्ने इच्छा छ । तर, लगाउन सकिरहेको छैन भने पुरानो मोबाइललाई सीसी क्यामेराको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । घरको मूल ढोका वा बैठक कोठा वा अन्यत्र आवश्यक परेको ठाउँमा राखेर भिडियो मोड अन गरेर यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
फोनबाट रेकर्ड हुने भिडियोलाई डेक्सटपसँग कनेक्ट गरेर कण्ट्रोल गर्न सकिने हुँदा खासै झन्झट पनि हुँदैन । त्यस्तै, अरू प्राविधिक बोलाइराख्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । एसएमएसद्वारा सर्भर लिङ्क गरेर यसको प्रयोग गर्न जानियो भने झनै फलदायी हुन्छ । पुरानो मोबाइललाई सीसीटीभी क्यामेराको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने ‘सेफ आई होम अलार्म’ तथा होम सेक्युरिटी स्पाई क्यामेरा’ एप्स इन्ष्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुरानो स्मार्टफोनलाई डिजिटल फोटो फ्रेमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै, तपाईंसँग धेरै तस्वीर हुन सक्छन्, तर ती सबै प्रयोग भइरहेको मोबाइलमा राख्दा पहिलो मेमोरी फूल हुन सक्छ । त्यस्तै, त्यो सबै बोकेर हिँडिराख्नु त्यति उचित पनि हुँदैन । त्यस्तो बेला तपाईं आफ्ना पुराना तस्वीर पुरानो मोबाइलमा सङ्ग्रह गरेर राख्न सक्नुहुन्छ । डिजिटल फोटो स्लाइड शोजस्ता एप्सहरू तपाईंको काम आउँछन् । यदि तपाईंको घरमा वाईफाई छ भने पुराना फोनलाई टीभी तथा डीभीडी प्लेयरमा राखेर पनि हेर्न सकिन्छ । केबलबाटै पनि जोड्न सकिन्छ ।
पुरानो स्मार्टफोनलाई डिजिटल रेडियोको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । हरेक स्मार्टफोनमा एफएम त पक्कै नै हुन्छ । त्यसैले, यसलाई घरको आवश्यक ठाउँमा वा किचेन, बाथरूममा रेडियो सेटको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
वाईफाई हटस्पट/यूएसबी टेठरिङ
घरमा इण्टरनेट लाइन छ, तर कनेक्शन स्लो वा इरर छ, घरमा इण्टरनेटको लाइन नै जोडिएको छैन र कम्प्युटरमै सोसिएल नेटवर्क प्रयोग गर्न मन लाग्यो भने पुरानो मोबाइलको उपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले पनि विभिन्न प्याकेजका साथ इण्टरनेट डाटालाई सर्वसुलभ बनाउन थालिसकेको छ । त्यसैले, यसको अधिकतम उपयोग पुरानो मोबाइललाई हटस्पट क्रियटर बनाएर ल्यापटप वा डेस्कटपमा (वाईफाई ड्राइभमार्फत) चलाउन सकिन्छ । काठमाडौंजस्तो घना बस्ती भएको ठाउँमा झ्यालमा नेट आउने अनि कोठामा नआउने समस्या हुन्छ । यस्तो बेला वेभ सफरिङ गर्न मन लाग्यो भने पुरानो मोबाइलबाट हटस्पट क्रियट गरेर नेटको मज्जा लिन सकिन्छ ।
डिजिटल घडी र अलार्म
पुरानो मोबाइललाई डिजिटल घडीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोबाइलको स्क्रिन सेभरको रूपमा डिजिटल घडी राखेर कोठाको भित्तामा वा टेबलमा राख्न सकिन्छ । यसले राति बत्ती निभेको बेला पनि कति बजेको रहेछ भने हेर्न सजिलो हुन्छ । यसैमा अलार्म सेट ग¥यौं भने त झनै यसको उपयोग हुन्छ ।
यसबाहेक पुराना मोबाइललाई टेबल क्यालेण्डर, डिजिटल फोटो फ्रेम, ई–रिडरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोबाइललाई यी कुरामा उपयोग गर्न मन लागेन र विक्री पनि गर्न सकेन भने कुनै सामाजिक सङ्घसंस्थालाई दान दिँदा कुनै गरीब वा असहायका लागि उपयोगी साधन बन्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय सुचना प्रबिधि केन्द्रको बिज्ञ सदस्यमा नरेन्द्र बोहोरा
ब्ल्याक होलको रहस्य पत्ता लगाउने तीन वैज्ञानिकलाई भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार
युट्युबले हटायो एक करोड १४ लाख भिडियो
भिडियो सम्पादन गर्नको लागि यी हुन् निशूल्क उपलब्ध सफ्टवेयर !
अब फेसबुकमा लाइभ भिडियो हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने !
टेलिकमले ल्यायो ई–शिक्षा प्याकेज